I-Grasshoppers, Family Acrididae
Izenzo kunye neMpawu zeGrasshoppers
Ininzi inambuzane esiyifumanayo kwiimyezo zethu, kunye neendlela ezihambahambayo zivela kwintsapho yase-Acrididae. Eli qela lihlulwe kwiintsapho ezincinci, kwaye zibandakanya iinkumbi ezijongene neengqungquthela, ezinqabileyo iinkumbi, iinkumbi ezinamaphiko, kunye nezinye iinkumbi eziyaziwayo.
Ukuba ufumana ingcambu kwintsimbi yakho okanye kwintsimi, mhlawumbi uza kuba ilungu lentsapho ye-Acrididae.
Uninzi lwezilwanyana luphakathi ukuya kumakhulu ngobukhulu, kodwa amalungu aloo ntsapho enkulu kakhulu ahluka kakhulu, ukususela malunga no-1-8 cm ubude. Uninzi luyimpunga okanye lubomvu ngombala, kwaye ludibene kakuhle phakathi kwezityalo apho bahlala khona.
Kwi-Acrididae, izitho eziphicothiweyo zifumaneka kumacala omacandelo okuqala esiswini, kwaye zihlanganiswe ngamaphiko (xa zikhona). Iingxowa zabo zifutshane, ngokuqhelekileyo ziya kwandisa ngaphantsi kwehafu yesigxina somzimba. I- pronotum ihlanganisa nje i-thorax, ingalokothi iphakame ngaphaya kwesiseko seephiko. I-tarsi inezigaba ezintathu.
UBukumkani - i-Animalia
IPhylum - Arthropoda
Iklasi - Insecta
Umyalelo - iOthoptera
Usapho - Acrididae
Ezi zinkumbi zondla kwiifama zezityalo, ngohlobo oluthile lweengca kunye neentshukumo. Xa iinkumbi zikhula zize zifike kwinqanaba, ukuqhuma kweenkumbi kungakhohlisa ngokupheleleyo izityalo kunye nezolimo kwiindawo ezinkulu.
I-Grasshoppers, njengawo wonke amalungu omyalelo we-Orthoptera, alawulwa ngokulula okanye angaphelelanga kunye nezigaba zokuphila ezintathu: iqanda, i-nymph, kunye nabantu abadala. Kwiintlobo zeentlobo ezininzi, amaqanda abekwe emhlabathini, kwaye le ngqungquthela yokugqithisa.
Uninzi lweentlobo zengcongolo kwintsapho yase-Acrididae zisebenzisa iifowuni zokuthandana ukutsala abafazi.
Kulabo benzayo, abaninzi basebenzise uhlobo lwe-stridulation apho baxubha khona iigwegwe ezikhethekileyo ngaphakathi kwelo linye lonyawo ngokubhekiselele emaphethelweni ephiko. Izinkumbi ezinamaphiko ezinamaphiko zihlutha amaphiko azo ngenkathi zibaleka, zenza i-crackle ezwakalayo. Kwezinye iintlobo, inkunzi ingaqhubeka nokulinda iqela emva kokuzalana. Uya kukhwela emqolo wakhe emva komhla okanye ngaphezulu ukuze amnciphise ekubeni axoxisane namanye amaqabane.
Ububanzi kunye nokuSasazwa:
Uninzi lweentlobo ze-Acridid ​​zihlala ezihlahleni, nangona ezinye zihlala emahlathini okanye kwizityalo zasemanzini. Iintlobo ezingaphezu kwezi-8,000 ziye zachazwa kwihlabathi jikelele, kunye neentlobo ezingaphezu kwe-600 ezihlala eNyakatho Melika.
I-Borror kunye ne-DeLong's Introduction kwi-Study of Insects , i-7 Edition, nguCharles A. Triplehorn kunye noNorman F. Johnson
I-Acrididae yentsapho - i-Grasshoppers emfutshane-ekhompyutheni-BugGuide.Net, ifumaneka ngoJulayi 29, 2012
ID ID - Acrididae, ifumaneka ngoJulayi 29, 2012
Khetha i-Pet Tarantula Species ekulungeleyo kuwe
Imiba Engamangalisa NgamaMiyane
Ulwahlulo lweezinambuzane - IsiCwangciso sePterygota kunye neSahlulo saKhe
I-Cicadas yePeriodical, uGenus Magicicada
Iifomflethi, i-Order Ephemeroptera
Ngaba Iintlanzi Ziyayifumana Ngokuqinisekileyo kwaye Zixhomekeke Xa Zihlala Kuwe?
Iimpawu eziqhayisayo malunga ne-Stick Insects
Indlela yokugcina iCaterpillar
5 Iingcamango Ngeengqungquthela
UDa - "omkhulu" kwiprofayili yomlingiswa waseTshayina
Iidrosaurs - I-Duck-Billed Dinosaurs
Yinyani kunye neReel
Umculo weRip Rap
Yintoni endiyenzayo ukuba ndiyenze xa iNdlu yam ihlaselwa?
UMariya, umKhosikazi weScots, kwimifanekiso
Isingeniso seMakethe yoMbane
IYunivesithi yaseToledo Admissions
College of William and Mary Admissions
UMTHETHO Ufumana ubungqina kwiNkomfa ye-Sun Belt
Ulwabiwo-mali kwi-First Generation naBafundi abangaphantsi
I-10 yezona ziLwandle eziLwandle eziLwandle eziLwandle eziLona ziLwandle
Ukunyathela iBhili yeeNgcoliso zezoPolitiko
I-SAT iMathematika: I-Level 1 Ulwazi lovavanyo lweSihloko